दशैँमा नेपाली फिल्म: अर्को दशैँ यस्तो नहोस् ! - चौतारीपोष्ट अनलाईन
दशैँमा नेपाली फिल्म: अर्को दशैँ यस्तो नहोस् !
फिल्मीखबर, काठमाडौं, 2020/10/24
कोरोना भाइरसको महामारी नफैलिएको भए यतिबेला सिनेमा घरमा दर्शकको ठूलो चाप हुने थियो । किनकि, दशैंको मुखमा रिलिज हुने फिल्मलाई दर्शकको पर्‍याप्त साथ मिल्ने गरेको छ । फिल्म बलियो बनेको छ भने दशैंमा प्रदर्शन हुने फिल्मलाई लगानी उठाउन गाह्रो पर्दैन । दशैं विदा लामो हुने भएका कारण यो समयमा फिल्म प्रदर्शनका लागि उपयुक्त मानिन्छ । यसैले त दशैंमा फिल्म रिलिज गर्न निर्माताबीच ठूलो राजनीति हुने गरेको छ ।
तर, यसपालीको दशैंमा फिल्म क्षेत्र ठप्प छ । दशैंको मुखमा केही फिल्मको छायांकन सुरु भए पनि सिनेमा हल विगत सात महिनादेखि बन्द छ। कोरोनाको संक्रमण फैलिन डरले सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा अगावैदेखि फिल्म निर्माण र प्रदर्शनसँगै सिनेमा हलमा खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निषेधाज्ञापछि भीडभाड हुने क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा फिल्म क्षेत्रमा भने प्रतिबन्ध हटेको छैन । जसले गर्दा सिनेमा हलमा लागेको ताल्चा खुल्न सकेको छैन ।
दशैंको मुखमा सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई सञ्चालनको अनुमति दिनेमा फिल्मकर्मीहरु विश्वस्त थिए । तर, सरकारले अहिलेसम्म फिल्म क्षेत्र खोल्ने संकेतसम्म दिएको छैन । यता सात महिनादेखि फिल्म सम्बन्धि सम्पूर्ण काम रोकिँदा हजारौं श्रमजीवि फिल्मकर्मीलाई समस्या परेको छ। फिल्म प्राविधिकलाई त विहान बेलुका हातमुख जोर्न समेत समस्या छ । तर, सरकार फिल्म क्षेत्रप्रति गम्भीर देखिएको छैन ।
‘ए मेरो हजुर ३, परदेशी, अल्लारे २, छक्का पञ्जा ४, आई एम ट्वान्टी वान, महजोडीको फिल्म, प्रेमपूजा’ लगायतका फिल्मले यस वर्षको दशैंलाई लक्षित गरेर एक वर्ष अगाडि नै प्रदर्शन मिति घोषणा गरेका थिए । तर, कोरोना महामारीका कारण यी कुनै फिल्मको छायांकन पूरा भएको छैन। कति फिल्मको त छायांकन समेत आरम्भ भएको छैन ।
वर्षभरि फिल्म फ्लप भए पनि दशैंमा रिलिज हुने फिल्मले करोडौंको व्यापार गर्दथे । व्यापारको लोभले गर्दा पनि फिल्मकर्मीबीच दशैंमा फिल्म रिलिज गर्ने होडबाजी हुन्थ्यो । तर, यसपाली कोरोना भाइरसका कारण सात महिनादेखि बन्द रहेको सिनेमा हलमा माकुराले जालो बनाएको छ । निर्माण सकिएका फिल्म पनि थन्किएका छन् । यो दशैंपछि फिल्म क्षेत्रमा चहलपहल होला कि ! आशा गरौं । र, अर्को दशैँमा निर्माताहरुकोदौडधुप, हलमा खचाखच दर्शक, मिडिया फिल्म व्यापारका समाचार, दर्शकहरुको कौतुहलता पुन: फर्किनेछ, कामना गरौँ ।
Prevविवादका ‘सुल्तान’ सलमान, तर स्टारडम उस्तै
NextIMPORTANCE OF ORGANIC FAIR AND EXPO FOR THE PROMOTION OF ORGANIC FARMING